Tubaakada Weyn wuxuu Arkaa Cannabis Mustaqbal Dahabi ah • Dawooyinka Inc.eu
British American Tobacco (BAT), oo ah shirkadda ugu weyn ee tubaakada ee Maraykanka VK ayaa sheegay inuu u arko xashiishadda mustaqbalka. Shirkadu waxay isku dayeysaa inay ka fogaato iibinta sigaarka dhaqanka.
BAT waxay sheegtay inay higsaneyso inay dardar galiso isbeddelkeeda iyadoo yareyneysa saameynta caafimaad ee badeecadeeda. Bishii Maarso, BAT waxay danaynaysay Organigram, oo ah soo -saare Canadian ah oo xashiishadda dawada ah. Waxay sidoo kale saxiixday heshiis lagu baarayo noocyo kala duwan oo xashiishka xashiishka ah oo bartilmaameedsanaya cannabidiol (CBD). "Marka aan ka fekereyno faylalkayaga mustaqbalka, wax soo saarka ka baxsan nikotiinka ayaa runtii xiiso u leh koritaankeena mustaqbalka," agaasimaha BAT, Kingsley Wheaton ayaa u sheegay Barnaamijka Maanta ee Radio 4.
1 CBD oo beddel u ah tubaakada iyo nikotiinta
2 Kordhinta iibka iyada oo loo marayo iibinta vape
3 U wareejinta suuqa tubaakada
4 Tubaakada ayaa dib loo soo kabanayaa
CBD oo beddel u ah tubaakada iyo nikotiinta
Wheaton, oo ah sarkaalka ugu sareeya suuqgeynta BAT, ayaa sheegay inay u arkeen badeecadaha la xiriira xashiishadda inay qayb ka tahay koritaankeeda mustaqbalka. Shirkadda ayaa hadda tijaabineysa wax soo saarka CBD vape ee Manchester. "Waxaan u malaynayaa CBDadhiga waa isbeddel cusub oo mustaqbalka ah. Caqabadda hadda taagan ayaa ah in la yareeyo waxyeellada caafimaadka dadweynaha, taasoo horseedaysa in dadku si dhakhso leh ugu beddelaan beddelka tubaakada iyo nikotiinta.
Kordhinta iibka iyada oo loo marayo iibinta vape
Shirkadda weyn ee tubaakada ayaa soo saartay natiijooyinkeedii badhkii dhammaadkii bishii Juun, iyada oo ka warbixisay koror dakhliyeed oo ah 8,1% ilaa £ 12,18 bilyan. Shirkaddu waxay sheegtay in in ka badan saddex -meelood meel dakhligeeda UK ay hadda ka timaaddo sumacadaha sida Vuse, Velo iyo glo. Shirkadda weyn ee tubaakada ayaa aragtay wax badan oo ka mid ah macaamiisheeda cusub, iyada oo isticmaaleyaasha alaabooyinka aan guban-sida uumiga-ay ka kordheen 2,6 milyan illaa 16,1 milyan. Kooxaha tubaakada ayaa ku jira laba maan. Dhinac, soo-saarayaashu waxay rabaan inay diirada saaraan waxyaabaha kale ee tubaakada lagu beddeli karo, laakiin isla markaa waxay arkayaan lacago badan oo faa iidooyin ah oo ka imanaya iibinta sigaarka.
U wareejinta suuqa tubaakada
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira diirad sii kordheysa ee caafimaadka bulshada. Soo saarayaasha tubaakada sida Philip Morris International iyo BAT ayaa samaynaya wax kasta oo ay awoodaan si ay ugu beddelaan badeecado waxyeello yar leh. Horumar baa la gaarayaa. Natiijooyinka BAT lixdii bilood ee la soo dhaafay ilaa dhammaadka Juun waxay muujinayaan iibinta badeecadaha “nooc cusub” oo koray kala bar ilaa £ 942 milyan. Taasi weli waa qayb ka mid ah wadarta dakhliga 12 bilyan oo gini.
Qiyaasta Sigaarka - BAT waxay iibisay 316 bilyan oo sigaar ah muddadii lixda bilood ahayd - dhab ahaantii waxoogaa way korodhay iyada oo ay ugu wacan tahay soo kabashada baahida suuqyada soo kordhay. Inkasta oo tubaakada dhaqameed ay wali tahay hawsha ugu weyn, shirkaddu waxay sheegtay inay ka go'an tahay inay wax ka beddesho. ” Tani waxay sidoo kale soo jiidan kartaa saamileyda cusub.
Tubaakada ayaa dib loo soo kabanayaa
In kasta oo ay ka go'an tahay in la doorto caafimaad, haddana BAT waxay sheegtay in iibinta sigaarkeedu ay ka soo kabatay waddamada qaar ka dib markii tallaabooyinka xaddidan ee corona-ka ah. Iibinta noocyada sida Dunhill, Kent, Lucky Strike iyo Rothmans ayaa kordhay qeybtii hore ee sanadka, tusaale ahaan Brazil, Turkey iyo Pakistan.
Wadarta iibka alaabooyinkan guban kara ayaa hoos u yara dhacay 3% ilaa £ 10,5 bilyan. William Ryder, oo ah falanqeeye sinnaanta Hargreaves Lansdown, ayaa sheegay in weli ay jirto waddo dheer oo la gaari karo haddii shirkadda weyn ee tubaakada ay la kulanto bartilmaameedkeeda ah £ 5bn oo dakhli ah oo ka soo gala waxyaabaha kale ee nikotiinka marka la gaaro 2025.
cannabiscaafimaadkasigaar cabinsaxanBoqortooyada Ingiriiska
Faa'iidooyinka la sheegayo ee CBD way ku faafeen meelo fog fog, waxaana jira tiro sii kordheysa ...